AmaProteas azobhunga ngokugqoka amabhande amnyama
UFAF du Plessis ongukaputeni wamaProteas nokubhewe abe nombono esinqumeni sokugqiza amabhande amnyama kwezakhe emjikelezweni we-England Isithombe: BACKPAGEPIX
Stuart Hess | November 21, 2020
IQEMBU lakuleli lekhilikithi amaProteas, lingase libonakale ligqoke amabhande amnyama ezingalweni uma selidlala uchungechunge ne-England kule nyanga.
Kuzobe kuwuphawu lokuhlonipha asebebulawe yiCovid-19 eNingizimu Afrika, nokuqhuba umkhankaso wokulwa nodlame olubhekiswe kwabesifazane.
Yize kunjalo iqembu likholwa wukuthi selenze okwanele ukweseka umkhankaso iBlack Lives Matter, nokusho ukuthi ngeke libonakale liguqa ngedolo emidlalweni yalo, uphawu olwenziwa ngabezemidlalo abaseka imizamo yokulwa nokucwaswa kwabamnyama nokuliswana nokucwaswa kwabebala elimnyama.
Umqeqeshi wamaProteas uMark Boucher, izolo utshele i-Independent Media, ukuthi ukhulumile noLungi Ngidi, owaqala izingxoxo eqenjini ngeBlack Lives Matter, ngokubhala ezinkundleni zokuxhumana.
Uthe uNgidi uzwakalise ukugculiseka ngendlela iqembu elenza ngayo ukubhekana nokucwaswa kwabadlali abamnyama obekuthiwa kudla lubi, kumaProtea.
“U(Lungi) ujabule ngesesikwenzile ukweseka (umkhankaso) njengoba kwenzeka kulowa mdlalo (3TC),” kusho uBoucher.
Ngesikhathi uNgidi ethi ufuna amaProtea eseke lo mkhankaso, kwafana nokuthi ubhobosa ithumba ngokucwasana kwikhilikithi.
Kwaqale kwabakhona abamgxekayo okubalwa nababedlalela amaProteas, uPat Symcox, Boeta Dippenaar noRudi Steyn kodwa abanye abadlali asebethatha umhlalaphansi, uMakhaya Ntini no-Ashwell Prince, baphumela obala ngokubukelwa phansi abebekuthola ngesikhathi besayibamba eqenjini lesizwe.
Ngesikhathi kunomdlalo we-3TC ngoJuni abadlali, nezikhulu zeCricket South Africa, okubalwa nomqondisi wekhilikithi uGraeme Smith, baguqa ngedolo ngaphambi kokuqala komdlalo ukukhombisa ukweseka iBlack Lives Matter.
“Yinto eqhubekayo. Okumele uyikhombise ngokuthi uyiphile nokuyikhona esizama ukukwenza njengamanje kulesi sikwati esikhulu esinaso.
“Uma abadlali abayiphakamisa bebona ukuthi kumele senze okungaphezulu, bazokusho bese siyakhuluma ngakho. Bavulelekile ukusho uvo lwabo.
“Imigomo esesiphila ngayo manje ihambisana nokuhloniphana nokuzwelana. Lokhu kuholela ekutheni sibe nendawo evulelekile esikwazi ukukhuluma kuyona nangezihloko ezinzima,” kusho uBoucher.
Uthe abadlali bazobhunga ngokugqokwa kwamabhande amnyama okuhambisana nekhwelo likamengameli wezwe, uCyril Ramaphosa lokuhlonipha laba asebedlule emhlabeni ngenxa yeCovid-19 nokuqwashisa ngodlame olubhekiswe kwabesifazane.
UBoucher uveze ukuthi ike yamhlasela iCovid-19 kodwa ngenhlanhla ayangamqinisa. Kuvelile nokuthi kukhona umdlali otholwe enayo, osesemgonqweni.
IChiefs isiwukhiphile umswenko omusha